5 waa kiniiniyada cusub ee Lenovo ee loogu talagalay dhammaan noocyada jeebabka | Androidsis
Manuel Ramirez | | Lenovo, Kiniiniyada Android
Kiniiniyada 'Android' ma ahan kuwo xiise u leh aaladaha kale sida taleefannada casriga ah laftooda. In kasta oo ay jiraan shirkado sii wada soosaarka kiniiniyada sida shanta cusub ee ka socota Lenovo. 5 kaniini ee loo yaqaan 'Lenovo' kiniiniyada ah waxaan ka helnaa laba nooc oo kala sooca. Qaarkood waxay noqon lahaayeen guriga iyo qoyska, halka kuwa kale loogu talagalay inay noqdaan kuwo aad u jaban qiima ahaan.
Noqo sida ay doonto ha noqotee, waxaan haynaa taxane kale oo ah Qalabka Android oo leh shaashado waaweyn in loogu riyaaqo waxyaabaha ku jira warbaahinta badan, ciyaar ciyaar mood ama si fudud qalinka aan guriga ku haysano ku sawirno. Aynu aragno waxa shantan kiniin ee cusub oo ay soo saareen sumcadda caanka ah ee ku takhasustay kombiyuutarada iyo laptops ay ku saabsan yihiin.
1 Lenovo Tab E7, Tab E8 iyo Tab E10
2 Lenovo Tab M10 iyo Tab P10 oo loogu talagalay qoyska
Lenovo Tab E7, Tab E8 iyo Tab E10
Laga soo bilaabo taxanahan saddexda kiniin ah waxaan ka haysannaa Tab E7 oo ah kii ugu horreeyay ee la yimaada Android Go Edition. Hadda si fiican ayaan u fahmi karnaa sicirkeeda, taasna waa in $ 70 aad mid ka heli karto. Furaha Tab E7 waa seddex: barnaamijyo khafiifa, keyd badan oo gudaha ah iyo waxqabad si weyn loo hagaajiyay. Waa inaan ku aragnaa meesha ay ku sugan yihiin si aan si dhab ah u ogaanno haddii aan heli karno khibrad adeegsade oo aan ku sii nagaaneynin wax uun ka badan ujeeddooyin.
Tab E7 waxaa lagu gartaa a xallinta ugu yar ee 1040 x 600 ee shaashadda 7 inji, wax noqon kara wax aad u yar oo si fiican u tilmaamaya waxa loo yaqaan 'Android Go Edition'. Waxaan sidoo kale ka hadleynaa kamarad gadaal 2MP ah iyo kamarad hore oo ah 0.3 MP VGA. Guutooyinka waxaan kaheleynaa 'MediaTek MT8163B chip' oo saacadiisu tahay 1.3 GHz oo lagu daray maxaa noqon doona 1 GB oo RAM ah. Kaydintu waxay joogi doontaa 16GB, markaa waxaan bilaabi karnaa inaan jiidanno daruurta iyo Sawirada Google.
Waxaan sidoo kale haysannaa Lenovo Tab E8, in kasta oo ay tahay in la yiraahdo waa kiniin leh Android 7.0 Nougat, wax aan si fudud loo fahmi karin maalmahan. Waxaan leenahay Isla RAM, processor iyo kaydinta sida Tab E7. Waxa ku kala soocayaa waa shaashadda cabirkeedu yahay 8 inji iyo xallin sare: 1280 x 800 pixels. Tayada kaamirooyinka ayaa sidoo kale la kordhiyay iyadoo 5MP ay ka leeyihiin dhabarka iyo 2MP dhanka hore. Tab E8 wuxuu ku dhammeeyaa inuu isku muujiyo beytar gaaraya ilaa 4.850 Mah.
Waxaan ku dhamaynaynaa saddexda taxane ee Tab E, oo leh E10. Waxay sidoo kale ku leedahay Android Go Edition gudaha, barnaamijka. Shaashaddu way ka ballaaran tahay sida loogu yeero magaceeda si ay u gaarto 10 inji. Maxaa sii joogi doona isla xallinta tab E8. Marka waxaan si fiican u arki karnaa sida Lenovo uu ula ciyaaro qeexitaannada kala duwan si markaa loo siiyo kuwaas qiimaha hooseeya.
Lenovo Tab E10 wuxuu leeyahay jab Qualcomm Snapdragon 210 waxayna gaaraysaa 2 GB xusuusta RAM. Waxa aan ka beddelayn E8 waa kaamirooyinkeeda iyo awoodda batteriga, sidaa darteed waxaan horeyba u haysannaa soo koobitaankii ugu dambeeyay ee saddexda kiniin oo leh 'Android Go Edition'.
Lenovo Tab M10 iyo Tab P10 oo loogu talagalay qoyska
Saddexda hore waxay si fiican ugu qalmaan inay miiska fadhiyaan qolka fadhiga, in kastoo Tab M10 iyo Tab P10 ayaa habboon tan aawadeed Waxay yihiin kiniinno aad u awood badan oo qumman si ay u tuuraan wax kasta oo aan dooneyno marka la eego software-ka.
Lenovo Tab M10 wuxuu leeyahay 10-inch Full HD IPS shaashad, Qualcomm chip 450 GHz octa-core Snapdragon 1.8, 3GB oo RAM ah iyo 32GB oo ah kaydinta gudaha ee la ballaarin karo oo leh kaarka microSD. Faa'iidooyinka kale ayaa ah kuwa ku hadla afka Dolby Atmos, oo ku habboon kuwa isku dhaca maaddooyinka badan leh. Mana iloobi karno miisaanka fudud ee leh 480 garaam iyo dhumucdiisuna tahay 8,1 milimitir.
Lenovo Tab P10 sidoo kale wuxuu leeyahay Android 8.0 Oreo sida M10 oo waxaa lagu gartaa xitaa ka fiican, 7 millimitir, culeyskiisuna waa 440 garaam. Waxay kaloo leedahay isla Snapdragon 450 chip, in kastoo ay u socoto 4GB oo RAM ah iyo 64GB oo keyd gudaha ah. Waxaan muujineynaa dareenka sawirka faraha iyo markale kuwa ku hadla qalabka dhawaaqa, inkasta oo markan ay jiraan afar halkii labada laga heli lahaa M10.
Haddii aad u dooneysid kaniiniga qoyska bixiya tayo yar oo sawir ah, M10 wuxuu u hoggaansamayaa gadaal 8MP iyo hore 5MP. Waxay sidoo kale bixisaa batari weyn si loo gaaro awoodda 7.000 Mah.
Lenovo-ka Tab E7 wuxuu ku imaan doonaa qiime dhan 79 euro bishii Oktoobar. Lenovo E8 wuxuu qiimahiisu noqon doonaa 119 euro, in kastoo uu yimaado bishaan Ogosto. E10-ka ayaa iska fogeeya ilaa bisha Nofembar qiimaha 129 euro. Labada kale ee haray, Tab M10 iyo P10, waxay ku imaan doonaan 199 iyo 269 euro siday u kala horreeyaan bisha Oktoobar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Lenovo wuxuu ku dhawaaqay 5 kiniin oo cusub oo Android ah iyadoo seddex ay yihiin Android Go Edition
HTC waxay ku dhawaaqeysaa daah-fur bisha soo socota ee Ogosto 30. Ma noqon doontaa Nolosha U12?